NL (ခ) ဒီအမောင်: 08/09/12
အစကတော့ သူစိမ်းတွေပါပဲ... တစ်ယောက်ယောက်က လက်အရင်ဆန့်ထုတ်တာနဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုတာ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
နာမည်ကြီး စကောတလန် စာရေးဆရာတစ်ဖြစ်လဲ ဟာသမင်းသား Roterက ပရိသတ်ကို "ဘေးကလူနဲ့ ခင်ဗျားတို့ ပုခုံးချင်းယှဉ်ပြီး ထိုင်နေတာ ၂ နာရီလောက် ရှိနေပြီ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စကားတစ်ခွန်းမှ မပြောကြပါလား?" လို့ ပြောလိုက်တယ်။ သူ့စကားကြောင့် ပရိသတ်တွေ ရယ်မောခဲ့သလို လူတစ်ချို့က ကိုယ့်ဘေးမှာ ထိုင်နေသူတွေကို ထနူတ်ဆက်ကြတော့တယ်။
ဒီလောက်ပဲ လွယ်ကူရိုးရှင်း ခဲ့ပါတယ်... ဘေးမှာရှိနေတဲ့သူက ကိုယ့်ရဲ့စကားလေးတစ်ခွန်း၊ အပြုံးလေးတစ်ပွင့်နဲ့ ကိုယ့် "သူငယ်ချင်း" ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့တစ်တွေက တစ်ခါတလေ ကိုယ့်ကို အထင်ကြီးမှု၊ လူတန်းစား၊ လူမျိုးခွဲခြားမှုကြောင့် သူငယ်ချင်းကောင်းတွေကို လက်လွတ်ခဲ့ရတယ်။
တစ်ခါက မုန်တိုင်းကျပြီးနောက် ကားတွေသွားလာလို့ မရအောင် လမ်းတွေ ပိတ်ဆို့နေခဲ့တယ်။
ကျမတို့နေတဲ့တိုက်က သောက်ရေ ကုန်သွားတဲ့အပြင် ဆိုင်ကလူတွေကလည်း အစားအစာ လာမပို့နိုင်ခဲ့ဘူး။ ရေမရှိ၊ မီးမလာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီမှာ တစ်ခါမှ မခေါ်မပြော ခဲ့ဖူးကြတဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေက အချင်းချင်း အိမ်တံခါးခေါက်ပြီး စားစရာတွေ ပေးဝေလဲလှယ်ကြတယ်။ အိမ်တစ်အိမ်က လူစုပြီး ကပွဲလုပ်ခဲ့လို့ ကျမတို့ တစ်အိမ်လုံးလည်း အဲဒီကပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။ အသက် ၁၁နှစ်ကနေ အသက် ၇၅နှစ်ထိ အဲဒီပွဲမှာ ပါခဲ့ကြတယ်။ ကျမတို့တိုက်ရဲ့ လုံခြုံရေးမှူး စန္ဒားယားတီးတတ်မှန်း အဲဒီအချိန်ကျမှာ ကျမတို့ သိခဲ့ရတယ်။
တကယ်လို့ ခါတိုင်းလည်း ဒီလိုပဲ မိတ်ဆွေစုဝေးပွဲတွေရှိရင် အရမ်းကောင်းမယ်လို့ ကျမတွေးမိတယ်။
အဲဒီလိုဆိုရင် ကျမတို့နေတဲ့ တိုက်ကြီးက ပျော်စရာတွေနဲ့ နေ့တိုင်းပြည့်နေလိမ့်မယ်။
Posted by nllamin.com at 6:40 AM
လာမပြောနဲ့ .. မောသွားမယ်.. ဟဲဟဲ ...
ချောကလက်နို့၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး..................
ဆိုင်တွေရောက်လို့ ဘာမှာရမလဲ မသိရင် ချောကလက်နို့ ပူပူတစ်ခွက်ကိုသာ မှာပြီးသောက်လိုက်ပါ။ ချောကလက်နို့တစ်ခွက်မှာ ကျန်းမှာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးပါဝင်ပါတယ်။
ချောကလက်နို့ကို သောက်လိုက်တဲ့အခါ ပါဝင်တဲ့ ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်ကို ခန္ဓာကိုယ်မှ စုပ်ယူပြီး အဆီလျော့ကျအောင်နဲ့ အရိုးသန်မာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးကြောင်း လတ်တလောလေ့လာမှုတွေက ဆိုပါတယ်။
ဗီတာမင်ဒီနဲ့ ကယ်လ်စီယမ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဆီလျော့ကျအောင် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ ဗီတာမင်ဒီဟာ စားလိုက်တဲ့ အစားအသောက်မှ ကယ်လ်စီယမ်စုပ်ယူအားကောင်းအောင် ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ နို့မှာ ဗီတာမင်ဒီများစွာ ပါဝင်တဲ့အတွက် ချောကလက်နို့သောက်တာဟာ နေရောင်ခြည်ထဲနေတာလိုပဲ ဗီတာမင်ဒီကို ရရှိစေပါတယ်။
Posted by nllamin.com at 6:33 AM
အဘက်ဘက်က တွေးကာ ပူရတာပေါ့...
တစ်နေ့လုပ် တစ်နေစား ကျွန်တော်
အဆက်အသွယ်ကလဲ ကောင်းကောင်း မပေါ်..
မျှော်ခါ .. မျှော်ခါ... ခေါ်
ကိုယ့် ပညာအရည်ချင်းထက်သာတဲ့ အလုပ်ကခေါ်
Posted by nllamin.com at 6:31 AM
" လက်၊ ခြေထောက်၊ ပါးစပ် ရောဂါ "
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီ၊ မေ၊ ဇွန်လ များတုန်းက ကမ္ဘောဒီယားမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ဖျားနာမှုတွေနဲ့ ကလေးငယ် အယောက် (၅၀)ကျော် သေဆုံးခဲ့ရပြီးနောက် ကမ္ဘောဒီယား ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ WHO တို့ ပူးပေါင်း အဖြေရှာခဲ့တော့ Hand, foot and mouth disease (HFMD) ကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်း သိရှိ ခဲ့ရပါတယ်။
တကယ်တော့ HFMD ဟာ သာမန်ရောဂါငယ်မျှသာ ဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်ကနေ ဆယ်ရက်ကြာခံစားပြီးရင် ဘာဆေးမှ မသောက်ရပါဘဲ သူ့ဘာသာ ပြန်သက်သာသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားမှာ ကလေးတွေ အသေအပျောက်များခဲ့ရခြင်းအပေါ် WHO နဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ရာမှာ HFMD ခံစားနေရတဲ့ ကလေးအတော်များများ Setroid ဆေးတွေနဲ့ ကနဦးကုသမှု ခံယူ ခဲ့ကြရပြီးနောက် အဲဒီ Steroid ဆေးတွေက EV71 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်ပွားရတဲ့ HFMD လူနာတွေရဲ့ အခြေအနေတွေကို ပိုဆိုးသွားစေခဲ့တာပါတဲ့။
လက်၊ ခြေထောက်၊ ပါးစပ် ရောဂါ (HFMD) ဆိုတာ ဘာလဲ ?
ဒီရောဂါဟာ မွေးကင်းစအပါအ၀င် အသက် (၁၀)နှစ်အောက် ကလေးတွေမှာ ဖြစ်ပွားတတ်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖျားခြင်း၊ ပါးစပ်ထဲမှာ အနာတွေပေါက်ခြင်း၊ လက်၊ ခြေထောက်နဲ့ တင်ပါးတွေမှာ အနီစက်နဲ့ အရည်ကြည်ဖုတွေဖြစ်ပေါ်ခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာတွေခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။
Posted by nllamin.com at 6:30 AM
ဆရာခိုင်းတာ အရမ်းလွယ်တယ်ထင်တဲ့ ပလေတိုက ကိုယ့်ကိုယ် ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ဂျုံခင်းထဲဝင်ခဲ့တယ်။
ဒီထက်ကောင်းတဲ့ အနှံရှိဦးမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ယာခင်းအဆုံးထိ ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့မှ
Posted by nllamin.com at 6:28 AM
`ပျိုကညာ´...တို့ သိသင့် ၊ သိထိုက်သော မှတ်သားဖွယ်ရာ `ဆောင်ပုဒ်´ လေး ။
from - http://thazivoice.blogspot.com
Posted by nllamin.com at 6:26 AM
အစကတော့ သူစိမ်းတွေပါပဲ... တစ်ယောက်ယောက်က လက်အရင်ဆန...
ချောကလက်နို့၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး...............
`ပျိုကညာ´...တို့ သိသင့် ၊ သိထိုက်သော မှတ်သားဖွယ်ရာ...